KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - DEG DEG: Qaraxyo xoogan ka dhacay Jowhar
Sunday 9 December 2012 11:58
DEG DEG: Qaraxyo xoogan ka dhacay Jowhar
Muqdisho (KON) - Magaalada Jowhar oo ay goor dhow la wareegeen ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMSIOM ayaa waxaa lagu soo waramayaa in qaraxyo xoogan laga maqlay magaaladaasi.
Qaraxyadaan ayaa waxay ka dhaceen xaafadaha Horseed iyo Hantiwadaag ee magaaladaasi jowhar, inkastoo aanan la sheegin wax khsaaro ah oo ka dhashay qaraxyadaan.
Labaadan qarax mid ka mid ah ayaa wuxuu ka dhacay Saldhiga magaalada oo ay ku suganaayeen askarta dowlada lamana sheegin in wax khasaaro ah uu soo gaaray.
Saakay ayee aheydm markii Ciidamda Dowlada iyo kuwa Amisom ey la wareegeen Magaalada Jowhar.
Wixii kusoo kordha Warkaan kala soco Keydmeida.net